खुसिको खबर : घु’स लेनदेन हुने देशको सूचीमा नेपालको ९ स्थान सुधार ! – AB Sansar
खुसिको खबर : घु’स लेनदेन हुने देशको सूचीमा नेपालको ९ स्थान सुधार !
November 25, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on खुसिको खबर : घु’स लेनदेन हुने देशको सूचीमा नेपालको ९ स्थान सुधार !
काठमाडौं। घू’स लेनदेन व्यापक हुने देशको सूचीमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ स्थान सुधार गरेको छ । कूल १९४ देशहरुमा भएका भ्र’ष्टा’चा’रज’न्य घ’टनाहरुको वि’श्लेषणका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल १०७ औं स्थानमा रहेको ट्रेस ब्राइबरी रिस्क म्या’ट्रिक्सले देखाएको छ ।
यद्यपि नेपालले २ वर्षअघि हासिल गरेको स्थान भने गुमाएको छ र अहिले पनि त्यो स्थानमा आइपुग्न सकेको छैन । नेपाल सन् २०१८ को मेट्रिक्समा २ सय देशहरुको सूचीमा १०३ औं स्थानमा थियो । त्यसको एक वर्षअघि २०१७ मा २०० देशको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा थियो । गएको वर्ष २०१९ मा नेपाल धेरै खस्किएर २०० देशको सूचीमा ११६ औं स्थानमा पुगेको थियो । सन् २०२० मा नेपालले आफ्नो स्थिति सुधार गर्दै १०७ औ स्थानमा आइपुगेको छ ।
२०२० को सूचीमा शीर्ष स्थानमा अर्थात सबैभन्दा कम घुस लेनदेन हुने देशको रुपमा डेनमार्क परेको छ । दोस्रोमा नर्वे, तेस्रोमा फिनल्याण्ड, चौथोमा स्वेडेन, पाँचौंमा न्यूजिल्याण्ड, छैटौंमा नेदरल्याण्ड, सातौंमा स्वीजरल्याण्ड, आठौंमा जर्मनी, नवौंमा बेलायत र दशौंमा आइसल्याण्ड छन् । नेपालका छिमेकी देशहरु भारत ७७ औं स्थानमा, चीन १२६ औं स्थानमा, भुटान ४८ औं स्थानमा, पाकिस्तान १५३ औं स्थानमा, बंगलादेश १६६ औं स्थानमा र श्रीलंका ८७ औं स्थानमा छन् । माल्दिभ्सलाई सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
अविवाहित रहँदा स्वास्थ्यमा पर्छ यस्तो असर, अविवाहितहरुले अवस्य पढ्नुहोला !
आज पनि बजारमा घटयो सुन चाँदी को मूल्य !